လူသားဆန်သော လူပီသသော လူတွေရဲ့ အကြောင်းနဲ့ လူစိတ်မရှိသော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာသော လူအမည်ခံတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ နွေဦးနေရဲ့ အက်ဆေးကို ကျော်နွေဦး ခံစားတင်ဆက်ထားတာ နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 6.4K Share – 756
2021-06-24 at 11:04 PM
U Tin Oo says:
2021-06-25 at 6:50 AM
2021-06-25 at 6:56 AM
ကိုေက်ာ္ေႏြဦးရဲ႕အက္ေဆး ကိုနားေထာင္ပီး မ်က္ရည္မဆယ္နိုင္ခဲ႕ဘူး အရမ္းေကာင္းပါတယ္ ေတာ္ပါတယ္ နင့္ေနေအာင္ ခံျပင္းနာျကီးမိတယ္ 2021ျကီးကိုဘယ္လ္ုမွမေမ့နိင္သလို အရမ္းမုန္းမိတယ္ စာနာငဲ႕ညွာ ကိုယ္ခ်င္းစာ လူစိတ္မဲ႕မိစာၦာေတြသြားရာလမ္း ျကမ္းပါေစသား ျပည္သူ႔ေမတၲာစူးပါေစသား
2021-06-25 at 7:35 AM
အရမ္း မွန္ပါတယ္ စစ္မိ စၧာာ ေကာင္ေတြပါ
ကမ္ဘာပေါ်တွေ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကြားမှာခေါင်းပေါက်ပြီးလူနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူသော မျိုးစိတ်သစ်တမျိုးတွေ့ရှိကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များဖော်ထုတ်တွေ့ရှိ၊၄င်းမှာ မအလ မျိုးစိတ်သစ်ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျ 🤣🤣🤣
စဉ် မင်း ထွန်း says:
BBC BURMESE, RFA and VOA are taking bribes to lobbying for Junta SAC Terrorist Group.
အရမ်း မှန် အရမ်း တိကျ တဲ့ အရေး အသား အသံ ကို နားထောင် ရလို့ ကျေးဇူးပါ. ခံပြင်းမျက်ရည်ကျ ရင်ထဲ နာကျင် မိပါတယ်. ပြည်သူ များရဲ့ အားနဲ့ နွေဦးတော် လှန်ရေး ကို ဝန်းရံ ကြပါ စို့.အရေးတော်ပုံမုချအောင်ရမည်..
YouTube TV ဆိုတာတွေထက်
Radio လိုင်းကနေ လွှင့်နိုင်အောင် လုပ်ကြပါ။
အင်တာနက်မရတော့ရင် ခုလွှင့်နေတာတွေက ဘာမသုံးစားလို့မရတော့ပါဘူး။
Margaret Hlaing says:
2021-06-25 at 6:35 PM
2021-06-25 at 6:50 PM
တော်လိုက်တဲ့ အနုပညာနဲ့ပုံဖော်ခြင်းစာသားတွေကြိုက်တယ် လေးစားတယ် အားပေးလျက်ပါ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် အောင်ကိုအောင်ရမည်
は る says:
2021-06-25 at 7:04 PM
2021-06-25 at 8:50 PM
2021-06-26 at 10:19 AM
အက္ေဆးေတြနဲ႔ကဗ်ာက႑အရမ္းႀကိဳက္မိတယ္ ကိုက်ားရဲ႕ေရဒီယိုအစီအစဥ္လဲႀကိဳက္တယ္ မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္ေတြကလဲအမွန္နဲ႔အလြန္နီးစပ္တာေၾကာင့္ အားလံုးအတြက္တကယ္အက်ိဳးျပဳတဲ့အစီအစဥ္ပါပဲ
သတင္းေၾကညာခ်ိန္ေလးပိုရရင္ေတာ့ေကာင္းလိမ့္မယ္ အ့မွသတင္းအသစ္ေတြအျမန္ၾကားႏိုင္မယ္ေလေနာ့္ ေက်နပ္စရာသတင္းဌာနတခုပါ ထပ္ဆင့္ထုတ္လြင့္ေပးေသ မိဇၥ်ိမ ႏွင့္DVBကိုလဲေက်းဇူးပါ
စောဖိုးခွား ဖိုးခွား says:
2021-06-26 at 4:31 PM
ခုလိုအများသိ ေအာင်စု ေဆာင်းပီးပြန်လည် ေဝမျသိလိုတ်ရတာ ေကျးဇူးပါ
2021-06-27 at 6:55 AM
2021-06-28 at 1:25 PM
ကိုယ္ေစာင့္ နက္ says:
2021-06-28 at 2:23 PM